Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 28/06/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 28/06/2019
(နေပြည်တော်၊ ၂၈-၆-၂၀၁၉ ရက်)
Naypyitaw June 27
UEHRD meeting (3/2019) was held at the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement on 27 June 2019.
At the meeting, Dr. Win Myat Aye urged attendees to give effective humanitarian assistance. He also said that UEHRD tasks were long term ones, nevertheless it was also important to accomplish the short term ones effectively. ASEAN conductedapreliminary needs assessment on repatriation and identified possible areas for cooperation. ASEAN would cooperate with UEHRD on making repatriation efforts smoother, information dissemination, and providing basic services to the people.
Furthermore, he added that efforts were being made to allow UNHCR to assist ASEAN’s collaborative efforts in Rakhine State. In rehabilitating displaced persons in Rakhine state, it was important to focus on Rule of Law and social harmony. Then, the Vice Chairman (2), the Secretary and the members discussed about the status of works being undertaken and future work.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီ၏ (၃/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီ၏ (၃/၂၀၁၉) အစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ကော်မတီအနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကို ထိထိရောက်ရောက် ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ကာလတိုလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးသည်လည်း အရေးကြီးပါကြောင်း၊ အာဆီယံအနေဖြင့် ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကနဦး လိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နယ်ပယ်များ ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်များဖြန့်ဝေရေးနှင့် အခြေခံပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးတို့တွင် အာဆီယံအနေဖြင့် ကော်မတီနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ UNHCR အနေဖြင့်လည်း အာဆီယံ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည့်အခါ လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။